Akụkọ Paul Brenner na Martech Zone |
Edemede site na Paul Brenner
N'ihe karịrị afọ 25 nke ahụmahụ na mgbasa ozi & ntụrụndụ na ndu teknụzụ, Paul Brenner jere ozi n'ọtụtụ ọrụ c-suite, gụnyere Onye isi oche nkewa na Emmis Operating Company. Dị ka Onye isi oche nke NextRadio/TagStation, ọrụ ya lekwasịrị anya na mmepụta ihe ọhụrụ zuru ụwa ọnụ site na mmemme FM Chip na ekwentị niile maka nha ndị na-ege ntị, ahụmịhe ndị ọrụ ụgbọ ala emelitere, yana nyiwe njirimara data maka redio mgbasa ozi niile. Na 2019, Paul sonyeere Vibenomics dị ka onye isi njikwa iji nyere aka wulite atụmatụ ịga-ahịa maka ngwọta mgbasa ozi Audio Out-of-Home™ nke ụlọ ọrụ mbụ na-ere ahịa. Mgbe emechara nke ọma, a kwalitere Brenner ka ọ bụrụ Onye isi oche Audio OOH ka ọ na-ahụ maka mbọ niile gbara gburugburu ọrụ na-enweta ego na mmekorita ya na nso nso a sonye na Kọmitii Nnyocha DPAA na Kọmitii Mgbasa Ozi IAB Retail ọhụrụ.
Kedu ihe kpatara Audio na-anọghị n'ụlọ (AOOH) nwere ike inye aka duga mgbanwe ahụ na kuki ndị ọzọ
Tuzdee, Machị 8, 2022 Tuzdee, Machị 8, 2022 Paul Brenner
Anyị amatala nwa oge na ite kuki ndị ọzọ agaghị anọ ogologo oge. Obere koodu ndị ahụ bi na ihe nchọgharị anyị nwere ikike ibu ọtụtụ ozi nkeonwe. Ha na-enyere ndị na-ere ahịa aka soro omume ndị mmadụ na ntanetị wee nweta nghọta ka mma nke ndị ahịa ugbu a na ndị nwere ike ịga na webụsaịtị ika. Ha na-enyere ndị na-ere ahịa aka - yana ndị na-eji ịntanetị na-arụ ọrụ - nke ọma na ijikwa mgbasa ozi nke ọma. Ya mere, gịnị bụ nsogbu? Nke